सहयोग – Nepal Online Khabar
Posted in सहयोग
एप्पलको आइफोन ११ को डिस्प्लेमा समस्या देखिएको छ । उपभोक्ताहरुको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै एप्पलले आइफोन ११ को डिस्प्ले नि:शुल्करुपमा परिवर्तन गरिदिने कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।एप्पलका अनुसार आइफोन ११ को डिस्प्लेमा यस्तो समस्या देखिएको छ जसका कारण डिस्प्लेमा छुँदा रेस्पोन्ड हुँदैन । २०१९ को नोभेम्बर देखि सन् २०२० को मे महिनाको बीचमा उत्पादन भएका आइफोनहरुमा यस्तो समस्या देखा परेको एप्पलले जनाएको छ ।एप्पलले आफ्नो सपोर्ट पेजमा बताए अनुसार आइफोन ११ को डिस्प्ले मोड्युलमा केही समस्या देखा परेको छ । एप्पलले अघिल्लो वर्ष आइफोन ११ प्रो तथा आइफोन ११ प्रो म्याक्स मोडेलसँगै आइफोन ११ संस्करण बजारमा ल्याएको थियो । आइफोन ११ मा ६.१ इन्चको लिक्विड रेटिना एचडी डिस्प्ले रहेको छ । आइफोन ११ लञ्च भएको करिब एक वर्षभन्दा धेरै समय बितिसकेको छ ।एप्पलको डिस्प्ले प्रतिस्थापन योजनामा आइफोन ११ लञ्च भएको दुई महिन
मो’टोपन घटाउन चाहनुहु’न्छ ? रातको स’मयमा गर्नुहो’स् मात्र यी चार काम
आजभोलि जंग फुडको बढी सेवन, फ्या’टयुक्त खाना, व्यायामको अभावजस्ता विभिन्न कारणले गर्दा मानिसहरु नचाहादा नचाहदै मोटोपनको शिकार बन्ने गरेका छन् । यदी तपाई पनि मो’टोपनका कारण तनावमा हुनुहुन्छ । जति प्रयास गर्दा पनि मो’टोपन घटाउन सक्नुभएको छैन् भने चिन्ता नलिनुहो’स् । आज हामी तपाईलाई केही यस्ता टिप्सका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जुन उपायबाट तपाई सजिलै मोटोपन घटाउन सक्नुहुनेछ। जुन टिप्स रातको समयमा नियमित रुपमा पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । ग्रीन टी को सेवन: राति सुत्नुअघि ग्रीन टी पिउनुहो’स् । जति प्रयास गर्दा पनि मो’टोपन घटाउन सक्नुभएको छैन् भने चिन्ता नलिनुहो’स् । यसले शरीरमा मेटाबलिज्म बढाउने गर्दछ, जसले रातभरमा तपाईको वजन कम गर्नमा सहयोग गर्दछ । खुर्सानीको सेवन: वैज्ञानिक अध्ययका अनुसार मोटोपन घटाउनका लागि खुर्सानीको सेवन गर्नु पर्दछ । सुत्नुअघि यसको सेवन भोजनमा गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईक
आ’जभोलि धेरै ग्या’स्ट्रिकको स’मस्या लिएर अस्पताल जाने गर्छन्। ग्या’स्ट्रिक नभएका मानिस भेट्न मु’स्किल पर्छ। यो स’मस्या विभिन्न कारणले देखा पर्छ । ग्या’स्ट्रिक नेपालीको राष्ट्रिय रो’ग हो भन्दा पनि केही फरक पर्दैन । धेरैको ग्या’स्ट्रिक गुनासो सुन्न पाइन्छ हिजोआज । मानिस खान नपाएरभन्दा पनि खान नजानेर रो’गी छ हिजोआज । त्यसो भए के गर्ने त ? यदि ग्या’स्ट्रिक छ भने यी कुरामा ध्यान दिनुस्, तपाईंको स’मस्या च्वाट्टै निको हुन सक्छ । प्रशस्त पा’नी पिउने: लगातार पानी पिउँदा पेटमा ग्या’स जम्मा हुन पाउँदैन । जिउमा समेत पानीको सन्तुलन कायम राख्छ । तर, पानीको सट्टा कोक, फेन्टाजस्ता कोल्डड्रिङसकको प्रयोग गर्नु हुँदैन । यसले पेटमा ग्या’स बढाउँछ । लसुनपानी: बिहान उठ्नासाथ दुई–तीन पोटी लसुन पानीसँग निल्ने हो भने ग्या’स्ट्रिक भएकाहरूलाई फाइदा गर्छ । उच्च र’क्तचाप भएकालाई समेत यसले फाइदा गर्छ । खाना समय
काठमाडौँ — इजरायलले पहिलोपटक नर्सिङ क्षेत्रका लागि संस्थागत रूपमा पाँच सय नेपाली लैजाने भएको छ । जसमा ६० प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत पुरुष रहनेछन् । कूल २५ सय जना श्रमिक लैजाने नीतिअनुरुप इजरायलले पाँच सय नेपालीलाई अवसर दिन लागेको हो । यसका लागि नेपाल र इजरायलबीच श्रम सम्झौता गर्ने सहमति जुटेको छ ।सम्पर्कको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस 👇️यो सहमतिसँगै स्याहारसुसार केन्द्र (केयर सेन्टर) मा नेपाली श्रमिक जाने बाटो खुलेको छ । यसअघि घरमै बस्ने गरी केयर गिभरका रूपमा नेपालीलाई लगिएको थियो । अब अस्पतालको काममा लैजान लागिएको हो । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार यससम्बन्धी सम्झौतामा असोज १४ गते नेपालका तर्फबाट राजदूत अन्जना शाक्य र इजरायली परराष्ट्रमन्त्री गावी अस्खेनाजीबीच हस्ताक्षर हुनेछ । सम्पर्कको लागि यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस 👇️ शाक्यलाई श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रिपरिषद्को ब
Aug102020 by Nepal KhabarNo Comments
हिन्दु नारिको महान चाड मानिने हरितालिका तिज नजिकिदै गर्दा वरिष्ठ समाजसेवी ईशा गुरुङले यो बर्षको फजुल तिज खर्च खोटाङको पहिरो पिडितलाई घर बनाउने अभियानमा सहयोग गरेकी छिन् । खोटाङ जिल्ला साकेला गाउपालिका-१ बाझे च्यानडाडाका मानबहादुर खत्रीको गत असार ३२ गते भीषण बर्षातको कारण घर भत्किए पछि घर बिहिन बन्नु भएको परिवारको लागि बीस हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेकी हुन् । सो रकम एकाउन्टमा जम्मा भइसकेको अभियान्ता थिरेन्द्र भट्टराईले बताउनु भयो ।आर्थिक स्थिति नाजुक, परिवारमा जेष्ठ श्रीमान श्रीमति मात्र भएको र छोराछोरी नभएकोले घर बनाउन उनिहरुमा समस्या भए पछि गाउले साथै अन्य शुभेच्छुक बाट आर्थिक रकम जुटाउन थालिएको छ । आर्थिक रकम जुटाएर बस्नको लागि आवश बनाईदिने पहल भइरहेको र हाल सम्म एक लाख पचास हजार जम्मा भएको बाकी जम्मा हुने क्रम जारी रहेको भट्टराईको भनाईरहेको छ । घर बनाउन आवाश्यक रकम यतिल